Dhallaanka kelinimada ku yimaada oo mustaqbalkooda ka welwelsan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
sawir: Shakila Edizada/Sveriges Radio
Dhallaanka kelinimada ku yimaada oo mustaqbalkooda ka welwelsan
Rajada aan caddayn ee mustaqbalka laga qabo
La daabacay fredag 25 november 2016 kl 07.00
Atefe waa 16 jir la dhaqan Eva – waxay aad ugu farax-san tahay dhibco darajada ”A” oo ay maanta ku heshay imtixaan iskuulka lagaga qaadey.
Atefe waxay ka mid tahay kumannaan dhallaan keli-nimo dalka ku soo galey sannadihii ugu dambeeyey. Marar badan waxay ka fekertaa suurtagalka ah inay dalka deggenaansho ku heli doonto iyo in kale. Hasye yeeshee ay ku rajo wayn tahay mustaqbalkeeda. Waana mid ay aad ugu dadaasho tacliinta iskuulkeeda.
- Waxaan u karkabanahay sida badankood dhallaanka keli-nimada dalkan ku yimaada. Hase yeeshee waxaan ka cabsi qabaa in dalka Afgaanistaan dib la iigu celiyo. Cid ii joogta ama wax aan ka aqaanno dalka Afgaanistaan ma jiraan. Maalmahanna middaa un baan ka fekerayay, wixii intaa dhaafsii-san waa tacliinta waxa ii yaala iyo sidaan wax kub aran lahaa. Haddii dalka Afgaanistaan dib la iigu celiyana waa ay ii dhammaatay.)
Atefe waxay la deggan tahay qoys iswiidhish ah, halkaasina oo ey ku dhaqan yihiin afar kale oo dhallaan oo keli-nimo dalka ku yimid. Eva ayaa la yiraahdaa haweenayda ey la deggan yihiin. Eva ayaa ku howl-gasha tababare fardood. Inkastoo aanay Atefe wakhti badan u hayn inay tagto xarrummaha fardaha ayay haddana mararka qaarkood ay sawirro ka qaaddaa fardaha.
- kolkii aan dalkan imidba waxaan su’aalo iska waydiiyay miyaaney farduhu ku dhaxamoon dibadda, jawaabtii aan heleyna waxay noqotay maya, bani’aadamka ayay dhaxan dibadda ku tahay laakiin fardaha maya.
Hawadu way qaboowday ee iska ilaali inaadan ku taraarixin (dabadeed albaabka ayay soo furtay)
Daarta ay ku nooshahay Atefe waa daar aad u wayn oo ka kooban saddex dabaq. Dabeecadda ku hareereey-san ayaa ah mid aad u qurux badan. Kolka loo barbar-dhigo nolosha waddammada Afgaanistaan iyo Iiraan waa mid aad uga duwan. Waana nololay Atefe aad ugu farax-san tahay nolosha Sweden.
- Xiriir wanaag-san ayaa naga dhexeeya, waannu wada hadalnaa. Waxay wax iga waydiiyan xaaladdii iskuulkaygii, raashinkii aannu cuni jirnay. Raashinka waannu wada cunna, waxaannuna u nool-nahey sidii qoys.
- Halka bakeeyle ayaanu ku haysannaa. Yaasmiin, hej Yaasmiin………….
Boqolkii toban dhallaanka dalka keli-nimada ku yimaada waa hablo. Atefe waxay dalka timid muddo iminka sannad laga joogo, iydoona ka soo baqooshay dalka Iiraan. Ikastoo aanay wax akhbaar ah ka hayan Yurub ayay haddana ku dhiiratay inay safar u soo gasho.
- Mar haddii aanay jirin rajo mustaqbalka laga qabo, oo aadan qoyskaaga la noolayan. Mar haddii aadan heli karin nolo deggan oo aad xorriyad ku haysato, markaa waxaad ku khasban tahay inaad qaxdo oo aad nolol ka raadiso meel kale – xitaa haddii aadan garanayn luuqadda looga hadlo goobtaa, dhaqanka ey leeyihiin bulshada aad u timid. Waana mid lagu khasban yahay in la qaxo xitaa haddii waddada lagu dhiman karo sida dadka qaarkii ey naftooda ugu waayeen qaxoodii. Noloshaada adiga oo gacanta ku sida ayaad socdaal galeysaa. Dhibaatooyinkaa oo dhan iyada oo la soo maray ayaa haddanna maalintii la doono dib laguugu tarxiili karaa waddan aadan shaqa ku lahayn laguu tarxiili karo meel aanay ka jirin wax aan ahayn dagaal, Tallibaan iyo Daacish.
Inkasta oo aanay wax fikir ah ka hayn mustaqbalkeeda ayay Atefe isku dayeeysaa sidii ay niyadda ugu dhisan lahayd mustaqbalkeeda nololeed. Sidaasi oo ay tahay ayay maalin walba u socdaashaa iskuulka. Saddexda saacadood oo ay sii socod iyo soo socodka u gasho iskuulka ayay tamar badani kaga baxdaa.
- Waddammada G8 ku jira waa kuwee? Arday fasalka kula jira ayaa jawaab midda ka bixiyay: Ma garanaayo. Iyadu waxay akhrinaysaa: Faransiiska, Talyaaniga, Jabaan, Kanada, Ruushka……
Atefe ayaa damac-san inay noqoto dhakhtarka ilkaha ama dhakhtarka xoolaha. Waxay sidoo kale ka heshaa sawir-qaadista iyo inay biloowdo ciyaarta loo yaqaanno Taekwondo sida ugu dhakhsiyaha badan oo xilliga qaboobuhu u dhammaado iftiinkuna u bato.
- Intii aanan iskuulka bilaabin waxaan tababar ku sameeyn jiay ciyaarta taekwondo, hase yeeshee iminka waxaa iga hor-taagan tacliinta iyo saacadaha aan u sii socdo ama ka soo socdo iskuulka. Kolka uu bilowdo xilliga kuleeylaha ayaan dib u biaabi doonaa casharrada tababarka ciyaarta taekwondo. Laakiin hadda waxaan ka helaa sawir-qaadista un. Casharro sawir-qaadis ma aanan dhigan, laakiin fardahana ayun baan sawirro ka qaadaa marmar. Goobta aannu ku nool-nahey waa meel aad u qurux badan, sida ay sheegtay.
- Haddii dalka Afgaanistaan dib la iigu celiyo wax aan ka qabto halkaa garan maayo. Haddii dalka Iiraan dib la iigu celiyana waa sidoo kale. Dhibaato badan ayaa haysata dhallaain-yarada keli-nimo dalkan ku timaada. Meel noo wanaag-san oo nalagu celiyana ma jirto. Inaad qooyskaagi kala maqan tihiinna waa xaalad aan sahlanayn.
Dhalaanka kelinimada ku yimaada